Semalt3मुख्य वेब स्क्र्यापिंग दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई यसको बारेमा जान्नुपर्दछ
वेब स्क्र्यापि,, जसलाई वेब कटाई र डेटा निकासी पनि भनिन्छ, नेटबाट जानकारी निकाल्ने अभ्यास हो। वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयरले ईन्टरनेटमा हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, वा विभिन्न वेब ब्राउजरहरू मार्फत पहुँच गर्दछ। विशिष्ट जानकारी स collected्कलन गरियो र प्रतिलिपि गरियो। यो सेन्टरलाइज्ड डाटाबेसमा बचत गरिन्छ वा तपाईंको हार्ड डिस्कमा डाउनलोड हुन्छ। साइटबाट डाटा प्राप्त गर्न सजिलो तरीका भनेको यसलाई मैन्युअल्ली डाउनलोड गर्नु हो, तर तपाईं वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको कामको लागि। यदि सामग्री हजारौं साइटहरू वा वेब पृष्ठहरूमा फैलिएको छ भने, तपाईंले Import.io र किमोनो ल्याबहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ डाटा प्राप्त गर्न र तपाईंको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित गर्न। यदि तपाईंको कार्यप्रवाह गुणात्मक र अधिक जटिल छ भने, त्यसोभए तपाईं यी परियोजनाहरू मध्ये कुनै पनि आफ्नो परियोजनाहरूमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
दृष्टिकोण # १: DIY:
त्यहाँ ओपन-स्रोत वेब स्क्र्यापि technologies टेक्नोलोजीहरूको एक ठूलो संख्या हो। एक DIY दृष्टिकोणमा, तपाइँ विकासकर्ताहरू र प्रोग्रामरहरूको एक टोली राख्नुहुनेछ तपाईंको काम पूरा गर्न। ती केवल तपाइँको तर्फबाट डेटा स्क्र्याप मात्र गर्दैन, फाइल पनि ब्याकअप गर्दछ। यो विधि उद्यमहरू र प्रसिद्ध व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त छ। एक DIY दृष्टिकोण स्वतन्त्रता र यसको उच्च लागत को कारण स्टार्टअप सूट छैन। यदि अनुकूलन वेब स्क्र्यापिंग प्रविधिको प्रयोग गरियो भने, तपाइँका प्रोग्रामरहरू वा विकासकर्ताहरूले तपाइँलाई नियमित मूल्यहरू भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दछन्। जहाँसम्म, DIY दृष्टिकोण गुणवत्ता डेटा को प्रावधान सुनिश्चित गर्दछ।
दृष्टिकोण # २: वेब स्क्र्यापि tools उपकरण र सेवाहरू:
प्राय: जसो व्यक्तिले वेब स्क्र्यापि services सेवाहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ तिनीहरूका कामहरू पूरा गर्नका लागि। अक्टोपार्से, किमोनो, Import.io, र अन्य समान उपकरणहरू साना र ठूला मा लागू गरिएका छन्। उद्यमहरू र वेबमास्टर्सले मैन्युअली वेबसाइटहरूबाट डाटा पनि तान्छन्, तर यो त सम्भव छ यदि उनीहरूसँग ठूलो प्रोग्रामिंग र कोडिंग सीप छ। वेब स्क्र्यापर, एक क्रोम एक्स्टेन्सन, व्यापक रूपमा साइटम्यापहरू निर्माण गर्न र एक साइटको बिभिन्न तत्वहरू परिभाषित गर्न प्रयोग गरिन्छ। एक पटक, डाटा JSON वा CSV फाईलहरूको रूपमा डाउनलोड हुन्छ। तपाईं या त वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ वा पहिले नै अवस्थित उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रयोग गर्ने प्रोग्रामले तपाईंको साइट मात्र स्क्र्याप गर्दैन तर तपाईंको वेब पृष्ठहरू पनि क्रल गर्दछ। अमेजन AWS र गुगल जस्ता कम्पनीहरूले स्क्र्यापिंग उपकरणहरू , सेवाहरू, र सार्वजनिक डाटा निःशुल्क सित्तैमा प्रदान गर्दछ।
दृष्टिकोण # 3: डाटा को रूपमा एक सेवा (DaaS):
डाटा स्क्र्यापि ofको सन्दर्भमा, डाटा-ए-ए-सर्भिस एक यस्तो प्रविधि हो जुन ग्राहकलाई अनुकूलन डाटा फिडहरू सेट अप गर्न अनुमति दिन्छ। प्रायः संगठनहरूले स्क्र्याप गरिएको डाटालाई एक आत्म-भण्डार भण्डारमा भण्डारण गर्दछ। व्यापारीहरू र डाटा विश्लेषकहरूको लागि यो दृष्टिकोणको फाइदा भनेको यो हो कि यसले उनीहरूलाई नयाँ र विस्तृत वेब स्क्र्यापिंग टेकनीकहरू प्रदान गर्दछ; यसले अझ बढि सीसा उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू विश्वसनीय स्क्र्यापरहरू छनौट गर्न, ट्रेन्डिंग कथाहरू फेला पार्न, र डाटालाई कुनै समस्या बिना वितरण गर्न भिजुअलाइज गर्न सक्षम हुनेछन्।
डाउनलोड गर्न मिल्ने वेब स्क्र्यापिंग सफ्टवेयर
१. युपाथ - यो प्रोग्रामरहरूको लागि उत्तम उपकरण हो र आम वेब डाटा एक्स्ट्र्यासन चुनौतिहरू पार गर्न सक्छ, जस्तै पृष्ठ नेभिगेसन, फ्ल्यास खोल्ने, र पीडीएफ फाइलहरूको स्क्र्याप गर्ने।
२. Import.io - यो उपकरण यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेसका लागि राम्रो परिचित छ र वास्तविक समयमा तपाईंको डाटालाई स्क्र्याप गर्दछ। तपाईं CSV र एक्सेल फारमहरूमा आउटपुटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
Kim. किमोनो ल्याबहरू - तपाईको इच्छाको वेब पृष्ठहरूको लागि एक एपीआई सिर्जना गरिएको हो, र जानकारी न्यूजफीडहरू र स्टक बजारबाट खोप्न सकिन्छ।